Caqli-galka: Google Analytics iyo Is-dhexgalka Bogagga Soo Dhaafka
Shey kasta oo internetka ah waa in uu ogaadaa dhammaan faa'iidooyinka isku-xirnaanta Google Analytics websaydh. Barnaamijku wuxuu u oggolaanayaa raadinta dhinacyo kala duwan ee waxqabadka bogga. Mid ka mid ah arrimahan waxaa ka muuqda waxqabadka bogga - list of business intelligence tools. Bogagga soo dhicidda waa lagama maarmaan in suuq geyn. Waxay sameeyaan dareenka koowaad waxayna saameeyaan arrimo kale oo badan oo ku saabsan ganacsiga internetka oo ay ka mid yihiin joogitaanka warbaahinta bulshada iyo heerka sarrifka. Sidaa darteed, raadinta iyo qiyaasidda waxqabad bogga soo degta ayaa aad loogu baahan yahay marka go'aan laga gaadhi karo horumarinta ganacsiga ku soo noqoshada maalgashiga
Is-dhexgalka Google Analytics wuxuu ku siinayaa sawir buuxa oo macmiil ah. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad la socoto isdhexgalka bulsho ee kasta, falanqeeya socodka gaadiidka booqashada, iyo raadinta xidhiidhada dibadda. Waxay sidoo kale ku siinaysaa fikrado wax ku ool ah si aad ugu bedesho cabbiraadyada heerarka dhabta ah ee horumarinta ganacsiga.
Artem Abgarian, oo ah Xeeldheer khabiir, ayaa sheegaya in laba hab oo loo isticmaali karo in lagu dhexgeliyo bogagga soo degitaanka Google Analytics. Mid ka mid ah habka Isticmaalaha Maamulaha, iyo tan kale waxay ku lug leedahay gacanta ku-darsiga domain-ka ah ee Google Analytics.
Is-dhexgelinta Isticmaalka Maareeyaha Sare
Talaabada ugu horeysa ee nidaamkan waxaa ku jira helitaanka aqoonsiga bogga internetka. Markaad u saxiixdo GA, user waxaa la siiyaa qoraal ah oo leh code keli ah oo gaar ah. Isticmaalayaasha waxaa loogu talagalay in ay ku daraan xeerkaas goobta. Koodarka mar kale ayaa loo baahan yahay marka uu jiro isbedel mawduuca goobta ama user uu doonayo inuu ku daro Analytics qeyb ka mid ah bogga
Si aad u hesho boggaaga aqoonsiga boggaaga iyo qashinka ku jira koodhka, u saxiix koontadaada GA oo riix Maamulaha. Soodhiga xisaabta, dooro xisaab. Sidoo kale, u gudbi koontada HOYGA oo dooro hanti. Iyada oo hoosta ku taal, xulo Xogta Ku-Meel-Gaarka ah iyo Kadib Kormeerka Qodobka Waxaad arki doontaa boggaaga aqoonsiga bogga, iyo sidoo kale lambarka hantida ee ku yaal bogga sare iyo koodhka kumbuyuutarka raadinta, waxaa lagu muujiyaa raadinta boggaga internetka
Marka xigta, tag Goobaha oo riix Maamulaha Waraaqaha> Ku dar qoraalkaaga koowaad> Google Analytics. Gali aqoonsiga raadinta ee aad ku heshay tallaabada kowaad oo riix "Ku dar Faahfaahinta Aqoonsiga." Laba sanduuq oo qoraal ah ayaa furi doona: mid ayaa muujinaya "Faahfaahinta Qodobka" iyo kan kale wuxuu muujinayaa "Isticmaalka Qodobka". Sanduuqa "Isticmaalka Qodobka" waxaad ku riixdaa subdomains ee aad rabto in Google Istaandhaynta Qoraallada Google la isticmaalo. Ugu dambeyntii, keydso oo daabaco qoraalka iyo subdomain ee la soo xulay oo ay la socdaan boggooda waxaa lagu dhejiyaa Google Analytics.
Ku-kordhinta Bogagga Hoyga ee gacanta
Isla marka la raaco geeddi-socodka is-dhex-galka, warbixinnada dhabta ah waxay muujin doonaan martida firfircoon ee bogagga isku-dhafan. Macluumaadka booqdaha oo buuxa ayaa lagu arki doonaa warbixinnada kale ka dib 24 saacadood.
Iyadoo aan loo eegin nooca website-kaaga aad leedahay, had iyo jeer waa faa'iido ay ku ogaanayso sida ay dadku u booqanayaan goobta iyo waxa ay raadinayaan. Iyadoo isdhexgalka Google Analytics, helitaanka macluumaadkani waa sahlan. Talooyinka kor ku xusan waxay ka dhigeysaa geeddi-socodka xitaa si deg-deg ah sidaa darteed waxaad ku bilaabi kartaa adigoo kallifaya wax kasta metrik si aad u heshid ganacsi badan.